‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट दिपाश्री निरौलालाई किन हटाइयो ? खुल्यो यस्तो रहस्य — Sanchar Kendra
Highlights कलिउड मनोरञ्जन
काठमाडौं । नेपालको चर्चित टिभी कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट दिपाश्री निरौलालाई हटाइएको छ । उनको ठाउँमा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरलाई ल्याइएको छ । अब प्रसारण हुने एपिसोडमा दिपाश्रीको ठाउँमा दर्शकले करिश्मालाई देख्नेछन् ।
केही समय अघि दिपाश्रीले राजेश हमाल महानायक होइन भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा तानिएकी थिइन् । साेहि विवादपछि मुन्द्रेको कमेडी क्लब कार्यक्रमका प्रायोजक कम्पनीको दबाबमा नै दिपाश्रीलाई हटाइएको स्रोतको दाबी छ ।
दिपाश्रीले उक्त कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्दै आएकी थिइन् । अबको कार्यक्रममा भने अध्यक्षतामा करिश्मालाई देख्न पाइने भएको छ । मुन्द्रेको कमेडी क्लब चर्चित कलाकार जीतु नेपालको रियालटी कमेडी शो हो ।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ निषेधाज्ञा खुकुलाे भएसँगै पुन: सुरू हुने भएको हाे। ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ कोरोना महामारीका कारण सरकारी लकडाउनसँगै स्थगित भएको थियो। लामो समयपछि सुरू हुँदा अब प्रसारण हुने शृ‌ंखलालाई ‘सिजन २’ भनिएको छ। पहिलो सिजनभन्दा फरक स्वाद दिन कमेडी क्लबमा केही हेरफेर गरिएको जितुले बताए।
सिजन २ को पहिलो भाग २६ असोजदेखि हरेक सोमबार बेलुकी ८:४५ मा प्रसारण हुनेछ। जितुका अनुसार नयाँ सिजनमा करिश्मा बाहेक खड्गबहादुर पुन मगर पनि देखिने छन्।
यसैबीच नेपालमा पहिलो पटक आगोसम्बन्धी म्युजिक भिडिओ बनेको छ। आगलागी कसरी हुन्छ र यसबाट बच्न के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश बोकेको गीत बजारमा आएको हो।
किशोर कुमार भट्टराईको शब्द चन्दन श्रेष्ठको संगीत, किरण कँडेलको एरेन्ज रहेको उक्त गीतमा यमन श्रेष्ठको स्वर रहेको छ।वरिष्ठ कलाकार मह जोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यका साथै सुशील पोखरेल, यमन श्रेष्ठ, किशोर कुमार भट्टराई लगायतले उक्त भिडिओमा अभिनय गरेका छन्।
राम कुमार केसीको छायांकन र सिलन लम्सालको सम्पादन रहेको उक्त भिडिओलाइ वसन्त सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोलाई ओएसआर डिजिटलबाट रिलिज गरिएको छ।
राष्ट्रकवि घिमिरेको ५३ वर्ष पुरानो गीतलाई फेरि ‘हिट’
नारायण रायमाझीले १७ वर्षअघि कवि माधवप्रसाद घिमिरेले रचेको गीत आफ्नो संगीतमा रेकर्ड गरेका थिए। रचना हो– उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिनँ म एकैचोटि, के भो कुन्नि कहिले
घिमिरे २०२४ सालमा रचेको उक्त गीत २०६० सालमा जगदिश समाल र सपनाश्रीले गाउँदा धेरैले रूचाएका थिए। लोक-आधुनिक शैलीको संगीत कवि घिमिरेलाई पनि मन परेको थियो। तर रायमाझीले गीतका तीन अन्तरामध्ये दुई अन्तरा मात्रै रेकर्ड गरेका थिए।
त्यसैले कवि घिमिरे रायमाझीलाई बेलाबेला भन्थे रे– मेसो मिलाएर त्यो अर्को अन्तरा पनि रेकर्ड गराउनू है। रायमाझी आफूले श्रद्धा गर्ने र आफूलाई माया गर्ने घिमिरेको इच्छा पूरा गर्न सही समयको पर्खाइमा थिए। त्यो समय कुर्दाकुर्दै गत भदौ २ मा कविवर घिमिरेको निधन भयो।
अनि, त्यो गीतको एउटा अन्तरा थपेर घिमिरेलाई सुनाउने रायमाझीको चाहना अपूरै रह्यो। प्रत्यक्ष सुनाउन नपाए पनि उनले घिमिरेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण दिँदै उनको निधनपछि यो काम पूरा गरेका छन्। पछिल्लो पटक थपिएको अन्तरा यस्तो छ–
बेनीघाटमा उनीसित भेट भयो अस्ति, आज लाग्छ सधैंभरि सँगै थिइन् जस्ती
उनको अर्पण पहिले हो कि मेरो अर्पण पहिले, जान्दिनँ म एकैचोटि के भो कुन्नि कहिले
रि-रेकर्डिङ गरिएको गीतलाई रायमाझी कवि घिमिरेसँगको आफ्नो सम्झना र सम्मानका रूपमा लिन्छन्। रायमाझीले पुरानै लयमा नयाँ पुस्ताका गायक प्रवीण भेडवाल र रचना रिमालको स्वरमा गीत रेकर्ड गराएका हुन्। प्रवीण र रचना नेपाल आइडल सिजन ३ मा सहभागी भएका अहिलेको समयका चर्चित गायक हुन्।
प्रवीण नेपाल आइडलमा दोस्रो भएका थिए भने रचना उत्कृष्ट ८ बाट बाहिरिएकी थिइन्। रायमाझी भन्छन्, ‘यो गीत फेरि जगदिश र सपनाकै स्वरमा रेकर्ड गराउन मन थियो। तर उहाँहरू नेपालबाहिर भएकाले नयाँ पुस्ताका गायक रोजेँ।’ गीत सुहाउँदो आवाजको खोजीमा रोजेका दुई नयाँ पुस्ताका गायकबारे रायमाझी भन्छन्, ‘प्रवीण र रचना दुवै प्रतिभावान् भएकाले उनीहरूसँग काम गरेको हुँ।’
रायमाझीको छनोट अहिले सही सावित भएको छ। नयाँ गीतको छोटो समयमै युट्युबमा ४२ लाखमाथि भ्युज पुगिसकेको छ। हजारौं स्रोता-दर्शकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको गीतमा टिकटक बनाउनेको संख्या पनि प्रशस्तै छ। यो टिकटकमा भाइरलमध्येको गीत बनेको छ।
दुई फरक समयका दर्शक-स्रोताले मन पराएको गीतबारे रायमाझी भन्छन्, ‘पुरानै पुस्ताले मन पराएको गीत नयाँ पुस्ताका स्रोतालाई कस्तो लाग्ला भन्ने कताकता डर थियो। सबैले मन पराइँदिदा एकदमै खुसी छु।’ यो खुसीबीच उनलाई एउटै खेद छ- राष्ट्रकविलाई थपिएको अन्तरा पनि सुनाउन पाएको भए कति जाती हुन्थ्यो!
रायमाझी कवि घिमिरेलाई अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्झन्छन्। घिमिरेसँग उनका रचनाबाट प्रभावित भएरै जोडिएको बताउँछन्। ‘उनको प्रीति’ गीतमा संगीत गर्ने प्रक्रिया भने उनका लागि सहज थिएन।
कवि घिमिरेले लोकलयमा भरिएको धुन मन पराउँदै भनेका रहेछन्, ‘तपाईंले मेरै गण्डक क्षेत्रको लोकलय आधार बनाएर संगीत भर्नुभएछ। मनपर्‍यो।’ त्यसपछि रायमाझी र घिमिरेबीच सम्बन्ध झांगियो। रायमाझीले घिमिरेका थप रचनामा संगीत भर्ने अवसर पाए।
उनी सुनाउँछन्, ‘उहाँको रचनामा हालसम्म मैले रेकर्ड गरेको गीत यही हो। तर उहाँको शब्दका दस-बाह्र वटा गीतमा संगीत भरेको छु, जुन रेकर्ड हुन बाँकी छन्।’ घिमिरेको चर्चित गीति नाटक ‘मालती मंगले’ मन पराउने रायमाझीले आफ्ना लागि त्यस्तै गीति नाटक लेखिदिन आग्रह समेत गरेका रहेछन्। घिमिरेले बरू आफ्नो ‘हिमालवारि हिमालपारि’ गीति नाटकमा संगीत भर्ने अनुमति दिएछन्।
रायमाझीका अनुसार, ‘हिमालवारि हिमालपारि’ को काम उनले सुरू गरे पनि अझै अपूरो छ। उनी विस्तारै ती गीत सार्वजनिक गर्दै जाने योजनामा छन्। रायमाझी २०४२ सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिन काठमाडौं आएयता निरन्तर गायक र संगीतकारका रुपमा सक्रिय सर्जक हुन्। हालसम्म चार सय बढी लोक-आधुनिक गीतमा संगीत र दर्जनौं लोकगीतमा स्वर दिएका छन्।
रीमा इन्टरटेनमेन्ट स्टुडियो सञ्चालन गर्ने उनले यही नामबाट युट्युब च्यानल खोलेका छन्। बबरमहलस्थित आफ्नै स्टुडियोमा रेकर्ड गराएको ‘उनको प्रीति’ गीत त्यही च्यानलमा अपलोड गरिएको हो।
यसबाहेक रायमाझी फिल्म निर्देशक, निर्माता तथा लेखक पनि हुन्। ‘परदेशी’, ‘गोरखा पल्टन’ जस्ता फिल्म निर्देशन तथा निर्माण गरेका उनी हाल ‘परदेशी-२’ को छायांकन स्थल छनोटमा व्यस्त छन्। प्रविधिमा पहुँच र सहजताले अहिले गीत रेकर्ड गर्न मात्रै नभई स्रोतासम्म पुग्न पनि सहज भएको उनी बताउँछन्।
रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, एफएम, क्यासेट, सिडी, डिभिडी, फेसबुक, युट्युब र टिकटकसम्मको अनुभव सँगालेका उनी भन्छन्, ‘पहिला एउटा रचना स्रोतासम्म पुग्न लामो समय लाग्थ्यो। अहिले रातारात लाखौं स्रोताले सुनेर तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन्छन्।’
सरल शब्दमा गहन अर्थ दिन सक्ने खुबी भएका कवि घिमिरेको निधनपछि निस्किएको गीत भएकाले यसले धेरैको ध्यान तान्ने नै भयो। पहिल्यै मन पराइएको गीतमा नेपाल आइडलमार्फत चिनिएका र मनपराइएका गायकको उपस्थितिले अर्को आकर्षण थप्यो।
केही गीत-संगीत हरेक पुस्ताले मन पराउने खालका हुन्छन्। यो त्यस्तै गीत बनेको छ। प्रविधिले ताजापन दिए पनि रायमाझी नयाँ र पुरानो दुवै गीतको उत्तिकै महत्व रहेको बताउँछन्। ‘यी दुई भर्सन फरक समयमा जन्मिएका जुम्ल्याहा सन्तानजस्तै हुन्। कुन राम्रो भनेर तुलना गर्न मिल्दैन।’
भिडिओमा पुरानो गीतसँगको नाता स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्। भिडिओमा गीतकार घिमिरे, गायक जगदिश समाल र गायिका सपनाश्रीका फुटेज देखाइनु यही प्रयास हो। यो गीतले प्रेमको बीज अंकुराउने विन्दु कुन भन्ने प्रश्नमा रुमल्लिएका युगल जोडीको मनोभाव बोकेको छ।
भिडिओको सुरूमै पनि गीतकार घिमिरेले संगीतकार रायमाझीलाई गीतमा जस्तै प्रश्न गरेको सुनिन्छ– प्रेम गरिन्छ कि हुन्छ?